Yakanakisa Discount Koogeek uye dodocool Zvigadzirwa paAmazon | IPhone nhau
Discounts paKoogeek uye dodocool zvigadzirwa kuAmazon
Eder Esteban | | Kupikisana
Koogeek mucherechedzo uyo wave mumwe weakanyanya kukosha mumusika muchikamu chemumba uye chehutano zvigadzirwa. Kutenda siginecha, zviri nyore kuva neimba yakangwara, pamwe neupenyu hwakareruka. Iyo femu ine dzakasiyana siyana zvigadzirwa zviripo, zvine kukosha kukuru kwemari. Uye zvakare, nehumwe huwandu hwakawanda isu tine akateedzana ezvinoderedzwa zviripo pavari.
Iyi ndiyo kesi nguva ino nhevedzano yezvakakura discounts paAmazon. Mavari tinowana zvigadzirwa zveKoogeek uye dodocool zvine mutengo wenguva pfupi paAmazon Saka kana iwe uchifarira chero zvigadzirwa zvemhando idzi, ino ndiyo nguva yekuvatenga.
1 Koogeek Wi-Fi Smart Simba Strip
2 Koogeek akatungamira Strip Mwenje
3 Koogeek Abdominal Equipment Kudzidzisa Gear
4 Koogeek E27 Lampholder
5 dodocool Hub USB C 7 muna 1
6 dodocool Inopetwa Magnetic Chaja
Koogeek Wi-Fi Smart Simba Strip
Chigadzirwa chekutanga cheKoogeek chiri kutengeswa iyi ina-plug simba strip. Iyo tambo yemagetsi yatinogona kudzora nguva dzese tichishandisa vabatsiri vakaita saA Alexa. Nenzira iyi, tinogona kure kudzora nenzira yakapusa zvese izvo zvishandiso zvakabatana nazvo. Naizvozvo, isu tine mukana wekudzima, kubatidza kana kuronga zvishandiso kure.
Ichi chinhu chinogoneka nekuda kweapp iyo Koogeek inoita kuti iwanikwe kwatiri, nayo yekudzora zvese. Saka isu tine masimba pamusoro pemidziyo iyi nguva dzose. Nekudaro, kana isu tichida kubatidza kudziyisa kana kugadzira kofi, tinogona kuzviita zvakapusa. Uye zvakare, kumisikidza kwayo kuri nyore kwazvo.
Mukusimudzira uku paAmazon ivo vanowanikwa ku mutengo we26,99 euros. Kuti uwane kukurudzirwa, unofanirwa kushandisa kodhi yekudzora: UTVANRYU, iyo inogona kushandiswa kusvika Kukadzi 21.
Hapana zvigadzirwa zvakawanikwa.
Koogeek akatungamira Strip Mwenje
Chechipiri isu tine ino LED mwenje tambo, inova imwe ye Zvigadzirwa zveKoogeek zvinonyanya kufarirwa. Nekuda kweiyi tambo tinokwanisa kushandura kutaridzika kana mamiriro echero imba kumba nenzira yakapusa. Uye zvakare, isu tinokwanisa kusarudza kukwirisa kwatinoda kuti mwenje uve nayo nguva dzese nenzira yakasununguka. Saka inochinja pasina matambudziko kune yega nguva iri mumba. Kubva pakuona mafirimu kuenda kunodya nemhuri kana shamwari.
Muridzi a kuderedzwa kwesimba rekushandisa, sezvo iri tambo ye LED. Chimwe chinhu icho pasina mubvunzo chichava rubatsiro rwakanaka kana zvasvika pakudzivirira kunwiwa kubva pakanyanya kukwirira pamba. Sezvazvakaita nezvimwe zvigadzirwa zveKoogeek, isu tinokwanisa kudzora nyore nyore mutsetse uyu neapp.
Mukusimudzira uku kwenguva pfupi kuAmazon, mutengo weiyi strip ndeye 28,59 euros. Kunyangwe kuti uwane iyi dhisikaundi unofanira kushandisa iyi yakakosha kodhi: JMZZKQ69 iyo inogona kushandiswa kusvika Kukadzi 21.
Koogeek Abdominal Equipment Kudzidzisa Gear
Chigadzirwa chechitatu chinotisiyirwa naKoogeek ichi chijairira chepamuviri. Sarudzo yakanaka yekuti upinde muchimiro kumba, kuti igadzirise kune izvo zvinodiwa nemushandisi wega wega. Ichi chigadzirwa chinotarisa pakupisa mafuta emimba, inova nzvimbo inowanzo kuve yakaoma kuvanhu vazhinji. Naizvozvo, neichi chishandiso chichava zvishoma nyore. Zvakare, kuzviita kubva kumba kunonyanya kusununguka kune vanhu vazhinji.
Kutenda kwazviri, zvichave zvichikwanisika kuti vashandisi vagadzire avo maitiro. Chinhu chinobvumira kugadzirisa kuri nani kune izvo zvinoda mushandisi wega wega nguva dzese. Sezvimwe nezvimwe zvigadzirwa zveKoogeek, zvese zvinogona kugadziriswa pasina dambudziko kubva kuapp. Pamusoro pekuve nechengetedzo yeshanduko.
Kutenda kukurudzirwa kuAmazon zvinoita kutenga chigadzirwa ichi pa mutengo wakasarudzika wemamiriyoni e55,99. Kune avo vanofarira kukwanisa kuiwana pamutengo wakasarudzika, zvinodikanwa kushandisa kodhi yekudzikisira, inowanikwa kusvika Kukadzi 21. Iyo kodhi ndeye: LA7DZ6TA
Koogeek E27 Lampholder
Tevere tinowana iyi Koogeek mwenje chinobata. Unogona kuishandisa mune chero nzvimbo mumba medu. Nekuda kwechigadzirwa ichi, zvinokwanisika kuve necontrol yemababu atinoshandisa mumba medu. Zvinotipa mukana wekuve inodzorwa nevabatsiri vakaita seAlex kana Apple HomeKit Saka unogona kudzima kana kudzima girobhu, kana kuronga zvimwe zvezviito izvi.
Kune ichi chiito chekuronga isu tinofanirwa kushandisa iyo Koogeek app. Uye zvakare, nekuda kweiyo app zvinokwanisika kuita kugadzikana manejimendi yesimba rekushandisa aya mababu. Pasina mubvunzo, ruzivo rwechido chakakura kumushandisi, kuitira kuti kunwiwa kumba kuderedzwe.
Mukusimudzira uku paAmazon unogona kutenga kwema 28,99 euros chete. Iko kusimudzira kunowanikwa kusvika Kukadzi 21. Kuti uwane iyo pamutengo wakasarudzika, unofanirwa kushandisa kodhi iyi yekudzikisira: D4M5D6L9
dodocool Hub USB C 7 muna 1
Mushure mekusiyanisa akati wandei kwezvigadzirwa zveKoogeek, inguva dodocool. Yokutanga yavo iyi USB HUB, iyo ine huwandu hwenzvimbo nomwe dzakasiyana dzezviteshi, idzo dzekubatanidza dzakasiyana siyana. Iyo sarudzo inobatsira zvikuru, pamusoro pekugona kwayo kwakawanda sezvo iine mhando dzakasiyana dze USB ports dzinowanikwa.
Uye zvakare, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti ine saizi diki kwazvo. Naizvozvo, zvinotora nzvimbo shoma zvese patafura yehofisi uye kumba. Iwe unogona kutotakura pamwe newe nguva dzose. Imwe yemabhenefiti yazvinayo ndeyekuti inoshanda nemhando dzese dzemidziyo. Sezvo inogona kushandiswa ne Windows makomputa, Apple mhando dzakadai seMacBooks uye Chromebook yeGoogle. Iwe hauzove nematambudziko ekushandisa mune ino pfungwa.
Mukusimudzira uku paAmazon Inowanikwa nemutengo we20,99 euros. Kuti uwane iyo pamutengo wakasarudzika, unofanirwa kushandisa kodhi iyi yekubvisa panguva yekutenga: LGUZWW3D
dodocool Inopetwa Magnetic Chaja
Chigadzirwa chekupedzisira pane chinyorwa ndecheichi charger yakagadzirwa yakanangana neApple Watch. Iyo inobvumira vashandisi kubhadharisa iyo American firm's yakakurumbira wachi ine magineti kuchaja. Imwe yemabhenefiti yeiyi dodocool charger idiki saizi yayo. Kutenda kwazvinokwanisika kubhadharisa wachi kumba kana muhofisi pasina dambudziko. Sezvo zvichikwanisika kuipfeka nguva dzese.
Uyewo, ndiro yakapetwa. Saka zvinotora kunyangwe zvishoma nzvimbo yekutora newe. Inokutendera iwe kubhadharisa wachi mune akati wandei akasiyana nzvimbo. Kana wachi ichibhadhariswa, inoenda mumamiriro ehusiku, kuchengetedza bhatiri uye kuchaja nekukurumidza.
Mukusimudzira uku paAmazon unogona kutenga iyi dodocool charger pa mutengo we20,99 euros. Kuti uwane iyo pamutengo wakasarudzika, unofanirwa kushandisa kodhi iyi yekubvisa: H8I2PSLT, iyo ichave iripo kusvika Kukadzi 21.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Kupikisana » Discounts paKoogeek uye dodocool zvigadzirwa kuAmazon
Daniel P. akadaro
Ive nekuchenjerera, iyo tambo yauri kutaura pano haienderane neHomekit. Izvi zvinongoshanda neGoogle Imba uye Alexa. (Iyo inoshanda neHomekit ndeimwe modhi, yeiyo yakafanana mhando, ine matatu zvigadziko)
Pindura kuna Daniel P.
Shortcuts yave kuwanikwa yeWaze uye tinokuratidza maitiro ekuishandisa
Kutengesa uye kufarira maAirPod zvinoramba zvichikura